Apple inoita kuti udzore dzadzimwa iCloud mafaera, vokukurukura, makarenda uye zviyeuchidzo | IPhone nhau
Apple inoita kuti udzore dzadzimwa iCloud mafaera, vanobata, makarenda uye zviyeuchidzo
IPad nhau | | ICloud, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Zvirokwazvo iwe wakambofunga nezvazvo kanopfuura kamwe: kana vandinoshamwaridzana navo vakadzimwa kubva pane yangu kifaa, ivo vachangoerekana vadzimwa kubva kuICloud, sezvo shanduko dzakawiriraniswa ipapo ipapo, ndingaite sei kuti ndidzorezve? Uyu mubvunzo kusvika nezuro wakave nemhinduro yakaoma, uye pazviitiko zvakawanda wakaenda (mune yakanakisa kesi) kuburikidza nekudzoreredza kweye kifaa chako kuti uwanezve backup. Asi ikozvino Apple yawedzera mashandiro matsva kuICloud.com iyo inokutendera iwe tora chero mafaera akadzimwa kubva kuICloud drive, vanobata, makarenda uye zviyeuchidzo. Tinokupa iwe pazasi pazasi.
Kuti uwanezve iyi data unofanirwa kuwana iyo webhu iCloud.com uye uzvizivise pachako nedata rako rekuwana. Kana iwe uine maviri-nhanho sosi yakagoneswa, inotobvunza iwe kuti uise kodhi yakatumirwa kune yako yaunovimba mudziyo Paunenge uchinge uri mukati, tinya pane Zvirongwa, iyo icon pazasi kurudyi, uye pfugama kusvika pasi peji. Kuruboshwe iwe uchawana izvo sarudzo dzatiri kutsvaga.
1 Dzosera mafaera
2 Dzosa Vanoonana
3 Dzosera makarenda uye zviyeuchidzo
Rondedzero yemafaira akadzimwa kubva kuICloud Drive inoonekwa. Unogona kudzimisikidza nemazita kana zuva kana uchida. Dzvanya pane yaunoda kudzoreredza uye zvinobva zvango dzokera kune yako iCloud Drive folda Mafaira anongochengeterwa kwemazuva makumi matatu, mushure maizvozvo vanozobviswa zvachose.
Vatengi Izvo hazvigone kudzoreredzwa imwe neimwe, asi muhuwandu. Uchawana makopi ekuchengetedza akachengetwa (ini handizive kuti inoteera patani) uye nekudzvanya pane bhatani rekudzorera, iwo maficha anozotsiva iwo ari pamidziyo yese neakafanana iCloud account. Ehezve, iwo aunawo parizvino usati waatsiva anozochengetwa mune ino backup kana iwe uchida kuzvidzorera.
Dzosera makarenda uye zviyeuchidzo
Makarenda nezviyeuchidzo zvinoshanda zvakafanana, kudzoreredza mublock uye kusevha izvo zviripo kuitira kuti iwe ugone kuzvidzorera kana uchizvida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Apple inoita kuti udzore dzadzimwa iCloud mafaera, vanobata, makarenda uye zviyeuchidzo
america rodriguez akadaro
Nekukanganisa ndakadzima chiyeuchidzo dhairekita, hariwone sekudzoreredza, kupi kumwe iko kungave? Ini ndaive neruzivo rwakakosha kwandiri, ndinofanira kuitora uye handisi kuiwana, ndinozviita sei?
Pindura kuamerica rodriguez
Ivo vanofanirwa kuve varipo, ndiyo chete nzvimbo kwavanogumira kana iwe ukadzima chimwe chinhu kubva kuchinhu chako.
Mepu dzisiri pamhepo pa iPhone nhanho nhanho nhanho
Maitiro ekuisa iOS 8.4 pane yako kifaa